Maitiro ekumisikidza yerima mamiriro muGmail izvozvi zvave kuwanikwa kune vese vashandisi | IPhone nhau
Maitiro ekumisikidza rima maitiro muGmail izvozvi zvave kuwanikwa kune vese vashandisi
Gmail yakatanga kuburitsa nzira yakasviba paIOS mwedzi yakati wandei yapfuura, nguva pfupi yapfuura kuburitswa kweIOS 13. Sezvo mwedzi yapfuura, kugona kugonesa mamiriro erima muGoogle tsamba mutengi yanga ichisvika kune vamwe vashandisi nemidziyo, asi kwete ese.
Muchiitiko changu, ndanga ndichishandisa iyo yakavakirwa-mukati yeGima nzira yakasviba kwemwedzi yakawanda zvinoenderana nesisitimu theme pane yangu iPhone, zvakadaro pane iyo iPad ini handisati ndambove nesarudzo yekuimisikidza. Nekuburitswa kweazvino Gmail gadziriso, chiitiko ichi chave kuwanikwa kune wese munhu.
Mushure mekuvandudza iko kunyorera kushanduro 6.0.200519, iyo vhezheni yechishandiso iyo yave ichiwanikwa kwemaawa mashoma paApp Store, vashandisi vanogona kumutsa iyo yakasviba modhi nekumira, ramba uchishandisa mwenje modhi kana kumisikidza iyo application kuti iite otomatiki uye kudzima iyo yerima / mwenje modhi zvichienderana nesystem.
Nenzira iyi, kana yedu iPhone kana iPad yakagadzirirwa kuti batidza rima modhi otomatiki, Gmail inoratidzira rima interface apo iyi modhi ichiitwa uye icharatidza mwenje wekujekesa kana yadzimwa.
Maitiro ekumisikidza rima maitiro muGmail
Chinhu chekutanga kuve nechokwadi chekuti iko kunyorera kweGmail kwave kuri yakagadziridzwa kune yazvino vhezheni.
Tevere, isu tinovhura Gmail uye tinoenda ku Zvirongwa of application.
Dzvanya pa Musoro uye tinosarudza: Rima.
IMPORTANT: Kana iyo Themes menyu isina kuratidzwa mushure mekuvandudza kunyorera, tinofanirwa kuvhara application uye kuivhurazve kuti ibvise cache yekushandisa mumemori memory uye kurodha iyo nyowani vhezheni.
Kana isu tichida kuti dingindira richinje zvichienderana nekugadziriswa kwechigadzirwa chedu, isu tinofanirwa kusarudza Sisitimu yekusarudzika mumusoro weMusoro. Pakutanga isu tinofanirwa kuve nazvo yakagadzirirwa mukati Automático menyu Chitarisikomukati Screen uye kupenya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Maitiro ekumisikidza rima maitiro muGmail izvozvi zvave kuwanikwa kune vese vashandisi
Dzimwe iPhone 11 dzinowana greenish screen nekuda kwechimwe chisina kujairika chikanganiso
Teregiramu inotangisa yayo nyowani vhidhiyo mupepeti uye dzimwe nhau muchimiro chekuvandudza